Xisbiga Mucaaridka Ee UCID Oo Naqdiyay Hadal Kasoo Yeedhay Sarkaal Ka Tirsan Komishanka Qaranka Ee AIDS-ka Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Xisbiga Mucaaridka Ee UCID Oo Naqdiyay Hadal Kasoo Yeedhay Sarkaal Ka Tirsan Komishanka Qaranka Ee AIDS-ka Somaliland
Hargeysa(ANN)Xisbiga mucaaradka ah ee UCID, ayaa sheegay in aan la is barbardhigi karin sifaha ay ku timi aftida Koonfurta Suudaan si ay uga go’aan Waqooyiga dalkaasi iyo qadiyadda aqoonsi raadiska Jamhuuriyadda Somaliland. UCID oo daba socday aragti uu bixiyey Agaasimaha Maamulka
Lacagta Komishanka Qaranka La-dagaallanka AIDS-ka Mr.
Cabdikariim Axmed Xinnif oo uu sheegay in aqoonsiga Somaliland ku xidhan yahay wadahadal lala galo Soomaaliya, ayaa war-murtiyeed uu ka soo saaray oo afhayeenka UCID ku tilmaamay mid dhabar-jab weyn ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dalnimo ee Somaliland.
War-saxaafadeedkaas oo dhammaystirani waxa uu u dhignaa sidan; “Muddooyinkan dambe waxaa soo ifbaxaya dhawaaqyo kasoo yeedhaya masuuliyiin xukuumadda ah iyo shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo u dhashay Somaliland.
Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka (UCID) wuxuu ugu baaqayaa Xukuumadda iyo Xisbiga talada haya in ay ka waantoobaan arrimaha dhabar jabka ku keenaya qadiyaddeena iyo rabitaanka Shacabka Somaliland, waxaanuna leenahay waa in aad gudataan xilkii laydiin igmaday.”